पहिलो भ्रमणमा ओली र मोदीबीच चर्काचर्की - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
पहिलो भ्रमणमा ओली र मोदीबीच चर्काचर्की
काठमाडौं । ८ फागुन २०७२ मा हैदरावाद हाउसमा प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच औपचारिक दुईपक्षीय वैठकमा भनाभन भयो । बिषय थियो : नेपालको संविधान । उक्त वैठकमा सहभागी कूटनीतिज्ञका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘नेपालको संविधान समावेशी छ, लोकतान्त्रिक छ । कार्यान्वयनका क्रममा कमीकमजोरी देखिएछन् भने सच्याउँदै जाउँला ।’
ओली गुजरातको भुजमा जाँदा यादब समुदाय बाहुल्य गाउँमा पुगे । त्यहाँ उनले भाषण गरे, ‘यहाँका ६० प्रतिशत यादब हुनुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु । हाम्रो टिममा पनि सांसद लालबाबु यादब हुनुहुन्छ । उहाँले संविधान बनाउनुभयो, संविधान जारी गर्ने राष्ट्रपति रामवरण यादब नै हुनुहुनछ ।’ ओलीले त्यसोभन्दा लालबाबु यादबले उठेर हात हल्लाए ।
भुजको यादब समुदायले ताली बजायो । जानकारका अनुसार संविधानका बारेमा मोदीलाई लक्षित गरेर ओली बोलेका थिए । परराष्ट मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री ओली आधारभुत अडानबाट बाहिर गएका छैनन् । ओली होइन, परिस्थिति बदलिएको छ । बरु, प्रधानमन्त्री मोदीको अडानमा नरमपन छ ।’
प्रचण्ड र देउवा आउँदा के भयो ?
ओलीपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भारत भ्रमणमा संविधानबारे भारत नरम थियो । मोदीले अप्रत्यक्षरुपमा संविधानको स्वागत गरेका थिए । ३० असोज ०७३ मा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाली समाजका सबै पक्षलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयासबारे प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालका प्रजातन्त्रको संवैधानिक मजबुतीकरणको महत्वको प्रशंसा गर्दै भारतका प्रधानमन्त्रीले संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका निम्ति समाजका सबै पक्षहरुलाई साथमा लिने नेपाल सरकारको जारी प्रयासलाई स्वागत गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले नेपालका समकक्षीलाई उहाँको सबै प्रयासका निम्ति शुभकामना दिनुभयो । नेपालको शान्ति प्रक्रियामा ऐक्यवद्धता, समर्थन र सद्भावका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारत सरकार र जनतालाई धन्यवाद दिनुभयो ।’
प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा ८ भदौ ०७४ मा जारी संयुक्त बक्तव्यमा भारत झन् नरम भएको छ । बक्तव्यमा उल्लेख छ, ‘दुई प्रधानमन्त्रीहरुले शान्त, विकास र समुन्नतिका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरुको अपरिहार्यतामा जोड दिनुभयो, नेपालका प्रधानमन्त्रीले नेपालको हालैको राजनीतिक घटनाक्रमबारे जानकारी गराउनुभयो ।
भारतका प्रधानमन्त्रीले दुई स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएकोमा स्वागत गर्नुभयो । र प्रधानमन्त्री देउवालाई बधाई दिनुभयो । समाजका सबै पक्षलाई साथमा लिएर संविधान कार्यान्वयन तथा संघीय लोकतान्त्रिक नेपाल स्थापना गर्ने नेपाल सरकारको प्रयासको उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले स्थानय तहका चुनाव सम्पन्न गर्न भारतले गरकेो सहयोगको लागि धन्यवाद दिनुभयो ।’
ओली राष्ट्रपतिका विशिष्ट पाहुना
जर्मनीका राष्टपति डा. फ्रैंक वाल्टर स्टेनमियरको सम्मानमा शनिबार भारतीय राष्ट्रपति भवनमा वैंकट डिनर थियो । राष्टपति रामनाथ कोविन्दले दिएको डिनरमा सहभागी पत्रकारले ठट्टामा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई सोधे, अब यहाँ को पाहुना आउँदै हुनहुन्छ ? स्वराजको जबाफ थियो, ‘नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।’ अर्थात् ओलीलाई २४ चैत (७ अप्रिल)मा राष्टपति भवनमा साँझ स्टेट डिनरको तयारी हुँदैछ । राजकीय भ्रमणमा दोस्रोपटक आउन लागेका ओलीलाई २४ चैतमा हैदरावाद हाउसमा भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले दिवाभोज र साँझ राष्टपतिले रात्रीभोज दिने तयारी भएको छ ।
३ असोज ०७२ मा नयाँ संविधान जारीपछि प्रधानमन्त्री भएका ओलीले ७ देखि ११ फागुनसम्म भारतको राजकीय भ्रमणमा गएका थिए । त्यतिबेला पनि उनी राष्टपति प्रणब मुखर्जीको विशेष पाहुनाका रुपमा राष्टपति भवनमा बसेका थिए । अहिले पनि उनी राष्ट्रपतिका पाहुनाका रुपमा राष्ट्रपति भवनमै बस्दैछन् । उनीपछिका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले पनि राजकीय भ्रमण गरेका थिए । देउवाभन्दा अघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतको राजकीय भ्रमण गरेकी थिइन् । उनीहरु सबै राष्टपतिभवनमै बसेका थिए ।नयाँपत्रिकाबाट